ISKU DARNAANTA BEERASHADA DUCK (HYBRID EE CHERRY IYO CHERRY MACAAN) - CHERRY
Dhadhanka macaan ee jeeriga iyo iftiinka jiirka ee berry hal weyn - sida isku dhafan, marka laga reebo riyo ah, waa botanist inveterate. Laakiin dabiiciga ah, wax walba waa suurtagal, iyo xataa si ka badan sidaas darteed haddii loo tarxiilay si loo hagaajiyo pollination random ah. Sidaas darteed, bannaanka loo siiyey fursad ay ku kobciyaan dyuk ama, sida loogu yeedho, dheriga. Dukaamada waaweyn ee udambeysan waxay la yaabaan muuqaalka iyo dhadhanka, iyo geedaha - oo leh wax soo saar. Sida loo soo saaro mucjiso sida goobta, waxaan ku sheegi doonaa maqaalkan.
Duke: Waa maxay mucjisadan
Waayo, dad badan oo jecel dhirta miraha iyo berry, cawsku waa wax la yaab leh oo ka soo jeeda dunidu. Waxaan fahmi doonaa waxa uu yahay iyo waxa ka badan ee berry ah - jeeriga ama jeeriga macaan.
Caqli ahaan, Duke waa isku duuban labada dhaqameed. Intaa waxaa dheer, pollination ee geedaha kuwaas oo ku dhacay fursad qiyaastii qarnigii XVII.
Noocyada noocan oo kale ah oo xiiso leh, iyo wakhti ka dib waxay qaadeen taranka taranka ee geedo sida.
Ma taqaanaa? Ereyga "Duke" oo lagu tilmaamayo Beelaha geedaha waxaa loo adeegsadaa oo keliya dadyowga Slavic, iyo Yurubna kama aysan helin xidid. Magacani wuxuu ka soo jeedaa noocyada caanka ah "May Duke", oo macnaheedu yahay "May Duke".
Dhulka dhul-beereedka ee Soviet-ka ah, curiyaddii ugu horreysey waxay u muuqatay 90-kii Dhiibbaxa Jerriga Belle iyo jeeriga cad ee Winkler. Cilmi-baarayaashu waxay ujeedadoodu tahay beerashada gobollada waqooyi, sidaas darteed, waxay keentay iska caabin culus oo barafoobay. Hase yeeshee wiqiyooyin aad u xoogan ayaa ka xoog badan burooyinka jilicsan, geedka ayaa siiyay beerihii yaryar.
Qeybaha galbeed, oo keeney dhulkeena, sidoo kale waxay bannaanka u niyad-jabeen dabeecadahooda thermophilic, taas oo keeneysa dhibaatooyin badan leh jiilaalka. Qaar ka mid ah noocyo yar oo dhir ah, aqlabiyadda badankood waxay u muuqdaan kuwo aan midab lahayn, qaarkoodna waxay bixiyeen dhalid hoose.
Maanta, sawirka ayaa si isdabajoog ah u baddalay. Breeders qaateen sannado ah shaqo adag si ay u farxaan bannaanka beerta leh Beelaha adkaysi u cudurada iyo qabow. Intaa ka sokow, ugu dambayntii wuxuu ku guuleystay inuu gaaro wax-soosaarka sare. Tan iyo markii uu duk yahay hybrid jeeriga iyo jeeriga, waxaa jira tayada labada nooc ee ku jira, inkastoo ay jiraan muuqaalo yar oo cherry more.
Dhinaca kale, waa geed yar oo leh taajajin cufan, lafdhaqaaqyo caan ah, caleemo qoyan, ubaxyo cadcad iyo miraha ballaaran ee midabka casaan-yar.
Nooca iyo cufnaanta caleemaha, caraf udgoonaha, dhadhanka, dhaqanka jilicsanaanta jiilaalka ee u dhow cherry, iyo cabbirka miro, content sonkorta - si cherry macaan. Celcelis ahaan, mid ka mid ah caleenta wuxuu ku xiran yahay qiyaastii 15-20 g. Geeduhu waxay galaan marxaladda jajabka ee sannadka saddexaad ama afaraad, iyagoo keenaya 10 kg oo miro ah xilli kasta.
Waxaan kugula talinaynaa in aad la tashato liiska hore iyo dhexdhexaad ah noocyo cherry bislaan, iyo sidoo kale jaalaha ah iyo dhamaadka berrejta noocyo ee beertaada.
Noocyo kala duwan ee koromomomes ee jeeriga iyo jeeriga si adag u adkeeyay hawsha u dhigay botanists for taranta noocyada varietal kala duwan ee ducks. Taasi waa sababta doorashada ee xulashada gudaha muddo aad u yar. Ka mid ah soo jeedinta Yurub ee qarnigii la soo dhaafay, noocyo of wax soo saarka Faransiiska "Queen Hortensia", "Empress Eugenia" ayaa loo baahan yahay. Maanta waxay isku qabteen qaraabadooda:
"Saratovskaya baby" (oo leh calaamado sarreeya geed-koriinka dhexdhexaadka ah iyo miro ballaaran oo macaan, kuwaas oo ku qarsoon dhumucda taajka oo aan la helin shimbiraha);
"Cherry Wonderful" (waa mid xusuusinaysa dulqaadashada abaaraha, maadada loo yaqaan "pathogenic microbes" iyo "garee"), waxay soo saartaa waxsoosaar sarreysa sanad walba);
"Pivon" (waxay u qalantaa dareenka sababtoo ah dhadhanka dalagga);
"Hodosa" (waa geed cidhiidhi ah, oo siinaya berry macaan iyo dhadhan fiican leh;
"Spartan" (muuqaal ka mid ah noocyada nuucani waxay ku jirtaa caabbinta barafka sare, markaa waxaa lagula talinayaa gobollada waqooyi);
"Burly" (qorraxdu waa geed dheer oo leh miraha waaweyn oo casiir leh);
"Kalkaalis" (noocyo kala duwan ayaa ah tayada miraha);
"Theanna" (noocyada kala duwan ee noocan ah ayaa si ammaan ah loogu yeeri karaa heerka caadiga ah ee dhadhanka cherry);
"Ivanovna" (waa hogaamiye kala duwan ee kala duwan ee kooxdan iyo waa geed yar oo leh miro yar oo ballaaran);
"Habeenkii" (faa iidada taranka ayaa ku taala hidaha si ay ula jeeda wakiilada keena moniliosis iyo cocomicosis);
"Venyamova Amaan ah" (muuqaal ah noocyada kala duwan - miro yar oo cufan ah).
Waa muhiim! Gadashada geedo ee dheriga, iska ilaali. Mararka qaarkood waa la iibiyaa iyadoon wax caddayn ah kala duwaneyn sida hoos ku qoran "Duk" ama "Cherry-Cherry". Khatarta geedaha noocan oo kale ah waxay ku jirtaa asalkooda aan la fahmi karin, sida badanaa la diidey tijaabooyinka miro-dhalinta iyo jiilaalka-adag ee dhalmada hooyada waxaa lagu ogaaday qaabkan..
Doorashada goob loogu talagalay dhererka sii kordhaya
Si cherry wondrous ku mahadsan tahay goosashada miro, waxay u baahan tahay si aad u hesho meel sax ah. Haddii kale, boggaagu wuxuu noqon doonaa geedka barafka ah. Waayo horumarin buuxda penumbra waa penumbra muhiim ah, ka ilaalinta dabaylaha qabow iyo drafts, iyo sidoo kale hodan ah nafaqooyinka ciidda leh fal celin acid at pH 7.
Horumarka beeraha hoose, halkaas oo biyo badani ku ururaan xagaaga iyo hawada qabooba xilliga jiilaalka, ma shaqeyn doonto.
Waa muhiim! Fruiting badan, dhirbaaxada waa in lagu beeray xiga ee jiir, sababtoo ah iyagu naftooda ma pollinate iyo ma garanayaan manka ee jeeriga.
Wanaagsan waxaa jiri doona qorshe leh iftiin kala duwan iyo substrate bac leh. Haddii aysan jirin wax caan ah oo ku jira xaafadaada, waxaa habboon in la daryeelo ka hor inta aan la abuurin xaaladaha kaniisadda. Carruurta Acidic waa in la dhexdhexaadiyaa 1.5 kg jilicsan, iyo ciidda dhoobo culus waa in lagu badalaa meeshii laga soo gooyay iyadoo la isku daro qaybo siman oo ah ciidda bacrin ah iyo ciid.
Laakiin tani ma aha dhammaan xudduudaha cufka. Waa inay ku koraan meel u dhow jiiraanka iyo jeeriga, sababtoo ah iyagu ma awoodaan inay iskood u gooyaan. Wixii fruiting ku dhow ku filan 2-4 geedo.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, awowayaasheen waxay u sameeyeen cunto dhadhan ah, mana aanay aheyn guduud, laakiin cagaar.
Beeridda geedo qawaani ah
Tilmaamaha ugu muhiimsan marka la beerto geedo kala duwan ee dalagyada miraha miraha waa in la ilaaliyo fogaanshaha lagama maarmaanka ah ee u dhexeeya geedaha iyo diyaarinta kartida ee godka. Dhammaan fikradaha kale, beerashada iyo ka tagida guri waa ka duwan yahay kuwa ka soo horjeeda. Wanaagsan Waqtiga aasaasiga ah geedo waa guga hore, laakiin dhulka waa in ay kululaan si fiican. Si aad u bilawdo, sameyso nasasho meesha la doortay ee heerka 1 mitir oo dhexdhexaad ah ilaa 70 cm Dhaqamada kale waa inaysan aheyn wax ka dhaw 5 mitir. Qeybta hoose ee ceelka ku jiifso dheecaan, dusha sare - xaaqin isku dar ah hore loo diyaariyey ee digada qudhuntay iyo lakabka bacaadka ee dhulka.
Doorasho kale waxay noqon kartaa Bacriminta macdanta: 0.5 kg ee superphosphate iyo 300 g oo ah sulfate potassium. Geedka si qoto dheer u qoto dheer laguma talin, sababtoo ah qoorta aasaasiga ah ayaa sababi doona kallana iyo dhimasho of hybrid. Kadib markaad qodo nidaamka xididka oo toosan, ha ilaawin inaad si fiican u ruxayso qulqulka si aad u buuxisid hulalka dhulka hoostiisa, iyo biyo waraabin badan. Waxay qaadan doontaa laba baaldiyo oo biyo ah.
Ma taqaanaa? Qiyaastii 40 kiilo oo shinni shinni ah ayaa laga soo ururiyey hal hektar oo ah hudheel iyo cherry berries.
Sida loo daryeelo hybrid: beerashada saxda ah ee naaska
Daryeelka ducks waxay u baahan tahay dareen yar oo ka badan dhirta beerta kale. Tusaale ahaan, uma baahna inay quudiyaan. Dhammaantoodna, sababtoo ah nafaqo korodhka ayaa kicinaysa horumarinta qoryaha, laakiin, nasiib daro, xilliga jiilaalka ma laha wakhti ay ku sii xoogaystaan ​​oo ay ugu wacan tahay dareenka dhaqanka, iyo tan ugu xun - dhimashadiisa.
Ka waraabinta, samaynta taajka iyo daaweynta dhirta geedaha ayaa muhiim u ah beerista geedaha. Laakiin sidan oo kale ayaa habboon.
Sida miraha dhagaxyada oo dhan, Beelahaas uma baahna waraabin badan. Qoyaan xad-dhaaf ah ayaa keenaya dildilaaca geedaha iyo qalfoofka, iyo sidoo kale xanuujinta rotting rhizomes. Si aan u keenin geedka tijaabooyinka noocan ah, waa in la waraabiyaa kaliya abaarta dheer.
Geedo yar yar ilaa da'da shan waa in la dooro in badanaa la qoyaan, maaddaama la'aanta biyo la'aantu waxay keeni kartaa xididada si ay u qalalaan. Ha u oggolaan in qalajinta xoogga ah ee dhulka ku yaal wareegyada pristvolnyh. Inta badan ee waraabka ayaa ku xiran xaaladaha cimilada. Isticmaal biyaha ma aha biyo qabow, markasta difaac.
Waa muhiim! Noocyada ugu fiican ee ducks waa noocyada soo socda ee jeeriga macaan: "Annushka", "Donchanka", "Walaash", "Homestead".
Manjooyin keli ah Cherry-jeeriga la sameeyo isla markiiba ka dib markii laga beerto seedling. Heerka 60 cm dhulka, wuxuu ka jaray dushooda jirridda iyo laamaha qalfoofka. Nuqullada koobaad ee sanadka labaad, saddex-meeloodow meel caleemaha dhinaca gaaban. Bannaanka ayaa ogaaday in ka hor bilaabashada fruiting, geedaha waxaa lagu gartaa koritaanka xoog leh, iyadoo muuqaalka dalagga ugu horreeya, laamuhu joojiyaan sii kordhaya.
Wixii geedaha gaboobay, guga ku soo kabashada arimaha manjooyin, taas oo ah in laga soo saaro sprouts oo dhan taajka ilaa heerka 4-sano jirka ah. Nidaamkan waxaa la soo celiyaa shan ilaa lix sano.
Dheecaannada dhirta waa inaan loo oggolaan, maaddaama tirada iyo tayada berry ay ku xiran tahay arrintan. Marka aad sameyneysid timo, fiiri xagasha kala-soocidda caleemaha jir-ka-sameynta - waa weyn tahay, manjooyin yar.
Qodobbada iyo qulqulka wareegga gawaarida
Beerta qaar waxay beertaa digada cagaaran ee meelaha ballaaran si loo bacrimiyo ciidda huurka leh. Marka laga hadlayo arrimahan, doorashadan waa mid la aqbali karo, laakiin wareegyada pristvolny waa in ay had iyo jeer ku hoos nool yihiin qolofka madow. Waxay si joogto ah u qasabaan inay ka saaraan caws iyo carrada ka dabciyo. Oo waxaa wanaagsan in la sameeyo ka dib markii waraabiyo.
Dhulka dhulka la qodo oo aan caqabad ku jirin ayaa u oggolaanaya hawada inay u socoto xididada, taas oo muhiim u ah geedaha miraha dhagaxyada. Si aad u samayso microclimate qaas ah qoyan, substrate ah oo ku wareegsan afkoda geedaha waxaa lagu talinayaa in mulch leh hay. Tani waxay ka caawisaa geedaha inay xididdada ka ilaaliyaan jiilaalka waxayna xajistaan ​​qoyaan. Maya Ha ku kala qaadin mulch on dhul engegan.
Ma taqaanaa? Miraha duurku waxay gaari karaan 2 cm mugga.
Kaynku wuxuu leeyahay mashiinka u adkaysta, sidaas darteed, shaqada diyaarinta gaarka ah ee jiilaalka leh mulching waqtigii geedka uma baahna. Noocyo leh hiddo-wade aad u daciifsan oo hargab u nugul waxay u baahan tahay fiiro gaar ah, gaar ahaan gobollada waqooyiga.
Habka ugu caamsan waa in lagu daboolo qaybta xididka ee barafka, iyo qaybta kor ku xusan - oo leh polyetylen cufan. Dhirta da'da yar ee da'doodu ka yar tahay shan sano waxay sidoo kale u baahan yihiin wax-qabadka noocaas ah. Beeralayda qaarkood waxay wadaagaan waayo-aragnimada ay ku duubi karaan jirridda leh dhir ama dhirbaaxo. Nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si isku mid ah u xaliso laba dhibaato: Ka ilaali jilif in la cuno jiirka iyo ilaalinta qaybta rootiga ee jirridda ka soo dhaxeysa. Waxaad cabsiin kartaa hungurigaaga hunguriga adoo adeegsanaya warqad.
Ogow sida aad u badbaadin karto berry aad u jeceshahay inay ku dabbaalato xilliga jiilaalka.
Qodobbada waxtarka leh ee miro ducada
Faa'iidooyinka berry waa mid caqli ahaan loo xaqiijiyay. Dhiigga, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in miro-qabateyntu aysan aheyn uun lakulanka, laakiin sidoo kale waxay leedahay ficil-celin lid ku ah, wax-ka-qabashada cuntada, iyo saameyn ku leh jidhka bani-aadamka ee xanuunka muruqa caloosha, burburka dareemayaasha, cudurrada dhuunta iyo boogaha, gout, arthritis, anemia.
Onkologists ayaa ku qanacsan in casiir ah ee duke miro xannibaadaa burooyinka. Intaa waxaa dheer, berry yaab leh yihiin cuntooyinka yar-calorie. 100 g oo miro ah waa 50 Kcal oo keliya, 0.5 g oo baruur, 0.8 g oo borotiin ah iyo 0 g oo ah karbohidratka.